ဗာရာဏသီကျောင်းသားလေး: ယောင်္ကျားလေးမဟုတ်လို့တဲ့ မိမိရင်သွေးသမီးငယ်လေးအားညှင်းပန်းနှိပ်စက်သောအိန္ဒိယနိုင်ငံက ဖခင်
ယောင်္ကျားလေးမဟုတ်လို့တဲ့ မိမိရင်သွေးသမီးငယ်လေးအားညှင်းပန်းနှိပ်စက်သောအိန္ဒိယနိုင်ငံက ဖခင်
ကဲ ..ခေတ်ကြီးဘာတွေ ဖြစ်ကုန်ကြပြီလဲ...? မိမိရင်သွေးကိုတောင် ရက်စက်နေမှတော့ တစိမ်းအပေါ်မတွေးဝံ့စရာပဲပေါ့။ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အမျိုးသမီးမွေးဖွားခြင်းသည် စရိတ်ကုန်ကျသည်မှာမှန်သော်လည်း အဲလိုစရိတ်ကုန်ကျသည်ကို မိမိ၏ရင်သွေးအား မညှာမတာညှင်းပန်းနှိပ်စက်တာတော့ လူမဆန်မှုပဲလေ..။အင်တာနက်ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာတနေရာကနေတွေ့မိတော့ တင်မိလိုက်တာပါ။ မိမိနေသောအိမ်ပိုင်ရှင်မှာလဲ သမီးတယောက်ထည်းမွေးထားတာပဲ ချစ်လိုက်တာတုန်နေတာပဲ သူ့မိဘများက ၂၀၀၉ လောက်ကအဆိုပါ အိမ်ရှင်သမီးကိုမေးဘူး၏။ သူလဲ ယောက်ျားတယောက် တောင်းနိုင်ဘို့ သူ့မှာလဲ ဘွဲ့ ဒီဂရီတွေ များများတတ်မှဆိုပြီး ကြိုးစားနေရှာပါတယ်..။အမှန်ပြောရရင် ရုပ်ကတော့ တကယ့်ကို မလှပါဘူး.သို့သော် မိဘများကလဲ သူ့အတွက် လင်ကောင်းရရှိရေး ဓါတ်ပုံးလေးနဲ့ သားမက်ရှာပုံတော်ဖွင့်နေလေရဲ့ သူကလဲ အတတ်နိုင်ဆုံးဘွဲ့ဒီဂရီတွေ ရရှိဘို့ကြိုးစားနေဆဲပါ..။ ခုတော့ ဤသို့မဟုတ်အမျိုးသမီးလေးမွေးဖွားလို့ ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းဟာ လူမဆန်မှုပဲ..
သား အရွယ် သမီး ငယ် ကလေး ကို ဆေးလိပ် မီးဖြင့် ထိုးခြင်း ၊ ဓားဖြင့် ခုတ် ခြင်း ၊လည်ပင်း
ကို လှီးဖြတ် ခြင်း တို့ဖြင့် သတ် ဖြတ် ခဲ့ သည် ဟု CNN သတင်း တွင် ဖော်ပြထားသည်။
Afreen ဟု အမည် ပေးထားသည့် သုံးလ အရွယ် လသား ကလေး ငယ် သည် ဒဏ်ရာများ
ဖြင့် ဆေးရုံ သို့ရောက်ရှိ ခဲ့ ပြီး နောက် သေဆုံး ခဲ့ သည်။ ရဲ က ကလေး ၏ ဖခင် ကို လူသတ်
မှု ဖြင့် ဖမ်းဆီး ခဲ့ သည်။
Afreen ၏ မိခင် ဖြစ်သူ သည် သမီး လေး မွေးဖွား ပြီး နောက် နယ်အဝေး ရောက် နေသည့်
သူ့ယောင်္ကျား ဆီ သို့အကြောင်းကြား ခဲ့ ရာ ၊ ” မိန်းကလေး လား …. နင်ဘာလို့ငါ့ အတွက်
ယောင်္ကျား လေး မွေး မပေးတာ လဲ ဟု အကြောင်း ပြန်ခဲ့ သည်။
“သူက ယောင်္ကျား လေး လို ချင်တယ် ၊ မိန်းကလေး က ကုန်ကျ စရိတ် ကြီးတယ်။ သမီး
လေး မွေး ပြီး တစ်ရက် နှစ် ရက် နောက် တော့ သူ က ရာဇသံ ပို့ တယ်။ ဒီကောင်မလေး
ရဲ့မွေးနေ့အတွက် ရူပီး တစ်သိန်း (ဒေါ်လာ ၁၈၀၀) လိုတယ် ။ မင်း မိဘ တွေ ဆီ က ဒီ
ပိုက်ဆံ ကို တောင်း ၊ ငါတော့ စိုက်မပေး နိုင် ဘူး ၊ မရရင် သတ်ပြစ် လိုက် လို့ပြောတယ်”
လို့ အသက် ၁၉ နှစ် အရွယ် မိခင် ဖြစ်သူ ရပ်ရှမန် ဘာနူ က CNN သတင်း ကို ပြောသည်။
အိန္ဒိယ နိုင်ငံ သည် မိန်းကလေး များ အတွက် အဆိုးရွား ဆုံး နေရာ ဖြစ်သည် ဟု ကုလသမဂ္ဂ
အစီရင် ခံတစ်စောင် တွင် ဖော်ပြခဲ့ ဖူးသည်။
ယဉ်ကျေးမှု နှင့် အယူဝါဒ ရေးရာ အရ ယောင်္ကျား လေးများ ကို သာ မိသားစု များ က အလိုရှိ
ကြ ပြီး ၊ မိန်းကလေး များ ကို လိုချင် စိတ် မရှိ ဟု ဆိုသည်။
All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) မှာ ဒေါက်တာ Anand Krishnan
ယောင်္ကျား လေး တွေ မွေးဖွား နိုင်တာ အကောင်းဆုံး ရင်းနှီးမြုပ် နှံမှု ပဲ ဟု ဆိုသည်။
အိန္ဒိယ နိုင်ငံ ၏ ရိုးရာ အစဉ် အလာ အရ အမျိုးသမီးများ သည် အရွယ် ရောက်သည့် အခါ အိမ်
ထောင်ခန်းဝင် စရိတ် နှင့် လက်ထပ် စရိတ်ကို အကုန် အ ကျ ခံရသည်။
အိန္ဒိယ နိုင်ငံ တွင် အလားတူ အဖြစ်အပျက် များ မှာ နှစ်စဉ် ဖြစ်ပွား လေ့ ရှိ ပြီး ပြီးခဲ့ သည့် တစ်
လ ကျော်က သမီး ဖြစ်သူ ကို ရိုက်သတ် မှု တစ်ခု အိန္ဒိယ မြောက် ပိုင်း တွင် ဖြစ်ပွား ခဲ့ သည်။
သုံးလသား အရွယ် အမျိုးသမီး ၏ ဖခင် ဖြစ်သူ အိုမာ ဖာရွတ် ကို ရဲ က ကလေးသူငယ် ညှင်းပန်း
နှိပ်စက် မှု ၊ လူ့အခွင့် အရေး ချိုးဖောက်မှု ၊ လူသေစေမှု များ ဖြင့် ဖမ်းဆီးထားသည်။
Posted by ဗာရာဏသီကျောင်းသားလေး at 10:03 PM